Dowladda Soomaaliya oo dib u furtay waddo muhiim ah oo in muddo ah xirnayd (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Soomaaliya oo dib u furtay waddo muhiim ah oo in muddo ah xirnayd (DHAGEYSO)
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ku guuleystay inay dib u furto inta u dhaxeeysa isgoysyada shaqaalaha iyo KPP ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo muddooyinkii ugu dambeysay ay sababo amni awgeed u xirneed.
Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed iyo wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo si wadajir ah warbaahinta ula hadlay ayaa sheegay in culeyskii ummadda Soomaaliyeed heystay ee la xiriiray wadadaan ay ka qaadeen.
Labadaasi mas’uul ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in hadii wadadaan la furay ay ciidamada kala shaqeeyaan dhinaca amniga, si looga hortago falalka amni daro ee mararka qaar ka dhaca magaalada Muqdisho.
Dowladda uu hoggaaminaayo madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayay mas’uuliyiintaasi sheegeen inay ka go’an tahay inay wax badan ka badasho wixii hore u jiri jiray, si hormarka magaalada Muqdisho loo dar dar geliyo.
Wadada haatan dib loo furay ayaa waxaa inta badan ka dhici jiray qaraxyadda loo adeegsado gawaarida laga soo buuxiyay walxaha qarxa, waxaana wadadaasi ku yaalla hay’adda socdaalka iyo jinsiyayaddaha ee Soomaaliya.